स्वास्थ – NepalNewsTime
गर्मीमा काचो प्याज किन खाने ?
Nepal News Time	March 27, 2018
गर्मी शुरु भएसँगै मानिसहरुले खानपानमा विशेष ध्यान दिन्छन् । कयौं मानिस चिसो चीज बढी खान्छन् भने कयौं मानिस भोजन नै कम गर्छन् । केही मानिसले मौसम अनुसारको भोजन गर्छन् । यस्तै भोजन मध्ये प्याज पनि एक हो जो नेपाल, भारत लगायतका देशमा आलुपछि बढी प्रयोग गरिन खाद्य पदार्थमा पर्छ । लगभग सबैजसो भान्सामा प्याजको प्रयोग […]
स्लिम बन्न के नगर्ने ?
Nepal News Time	March 20, 2018
स्लिम बन्ने तरिका सजिलो छ । हामीले खानामार्फत ग्रहण गर्नेभन्दा खेर फाल्ने क्यालोरीको मात्रा कम हुनुपर्छ । यसका लागि कम खाने र शारीरिक काम बढी गर्ने गर्नुपर्छ । तर, स्लिम बन्ने बहानामा धेरैले यस्ता गल्ती गर्नु हुँदैन । प्रोटिन बढी खाने : फ्याट, कार्बोहाइड्रेट र सुगरजन्य खानाले शरीर मोटाउने भएकाले स्लिम बन्न चाहनेले यस्ता खानाको मात्रा […]
स्वस्थ जीवनशैलीका आधार
Nepal News Time	March 19, 2018
स्वस्थ जीवनशैलीका केही आधारहरु यी हुन् : निन्द्रा : निन्द्रा स्वस्थ जीवनशैलीको एउटा अभिन्न पाटो हो । शरीरलाई आराम प्रदान गर्न, उर्जा दिन र भोलिपल्ट अझै बढी फूर्तिलो भएर काम गर्न शरीरलाई निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । व्यस्त जीवनशैलीका कारण केही मानिस पर्याप्त निन्द्रा पाउन सक्दैनन् । अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार पर्याप्त सुत्न नपाउने […]
यसकारण देखिन्छ सपना
Nepal News Time	March 18, 2018
धेरै मानिसले नियमित सपना देख्ने गर्छन् । सपना पनि फरक–फरक प्रकृतिका हुन्छन् । कहिले रोमान्टिक सपना देखिन्छ त कहिले डरलाग्दो । तर, यस्ता सपनाबारे समाजमा अनेक भ्रम छन् । सपनालाई नै आधार बनाएर भविष्यवाणीसमेत गरिन्छ । सपनाबाट सुखद वा दुःखद दिन भनेरसम्म किटान गरिन्छ । उसो भए किन देखिन्छ त फरक–फरक सपना ? मनोविद् गोपाल […]
बालबालिका घुर्नु कति जोखिमपूर्ण ?
Nepal News Time	March 16, 2018
बच्चाहरुमा सास फेर्ने क्रममा घ्यारघ्यार हुनु, घुर्नका साथै विभिन्न प्रकारका आवाज सुनिने गर्छ । यी आवाजहरुले कुनै रोगको संकेत गरिरहेका हुन्छन् । धेरै सानो बच्चामा नाक बन्द भएर सुनिने आवाज बाहेक यसरी सुनिने आवाजलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । श्वास भित्र लिँदा सुनिने आवाजलाई ‘स्ट्राइडर’ भनिन्छ भने बाहिर फाल्दा सुनिने आवाजलाई ‘हिवज’ भनिन्छ । स्ट्राइडर […]
यी हुन् कपाल झर्ने समस्याको राम्रो समाधान
Nepal News Time	March 15, 2018
कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? कुनै पार्लरमा गएर हेयर ट्रिटमेन्ट गरेर कपाल झर्नबाट जोगाउने सोँचमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए पार्लरमा गएर पैसा नखन्याउनुहोस् । तपाइँ आफैले केही जुक्ति लगाउनुभयो भने तपाइँको कपाल र्झन कम हुनेछ । यसको लागि केही प्राकृतिक वस्तु तथा विधि काफी छन् । तल उल्लेखित सजिला टिप्स अपनाउने कोसिस गर्नुहोस् । यसले […]
निदाउन के गर्ने ?
Nepal News Time	March 13, 2018
मीठो निद्राका लागि यी टिप्स उपयोगी हुन सक्छन्ः दिउसोको पेय बदल्नुस् दिउसो चिया, कफीजस्ता क्याफिनजन्य पेय पदार्थ खाने गर्नुभएको छ भने दिउसो २ बजेपछि यस्ता पेय पदार्थ लिन चटक्कै छोड्नुस् । राति सुत्नुअघि चिया र कफी खाने बानी छ भने तत्काल आफूलाई सुधार्नुस् । किनकि, निद्र नलाग्ने समस्या भएका मानिसका लागि विशेष गरेर कफी घातक […]
३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
Nepal News Time	March 12, 2018
तपाईंं महिला र ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ, जुन काम अहिलेसम्म तपाईंंले नगरेको पनि हुन सक्छ । यस्तो अनुभवले फरक व्यक्तित्व निर्माणका लागि सघाउ पु-याउँछ । भाषण तपाईं कसैलाई उत्प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ भने हजारौँको बीचमा भाषण गर्न सक्नुहुन्छ । जसका माध्यमबाट थुप्रै मानिसबीच चिनिन पनि सहयोग पु-याउँछ । […]
Nepal News Time	January 24, 2018
नवजातशिशुको श्वासप्रश्वास एक मिनेटमा ६० पटक भन्दा बढी चलिरहेको छ भने सचेत भइहाल्नुहोस् । किनकी यो निमोनियाको संकेत हुन सक्छ । जसमा नवजातशिशुको श्वासप्रश्वास छिटोछिटो भइरहे पनि परिवारका सदस्यले वेवास्ता गर्ने गरेको छन । ढिलोगरी अस्पताल ल्याउँदा शिशुको ज्यन नै जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन । लक्षण पहिचान गरौं —नवजात शिशुको नाकको चुच्चो भाग, ओठ वा […]
हामि संग जोडीनुहोस्
Nepal News Time
फेसबुक-ट्वीटरमा अब नक्कली अकाउन्ट पत्ता लगाउन सकिने
२४ करोड खर्चेर पोखरामा नेपालकै ठूलो फनपार्क
सरकारले भन्यो, ‘फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने
प्रहरीका पूर्व हाकिमद्वारा ३ सय १५ प्रहरीको दुरुपयोग, एक साताभित्र फिर्ता गर्न गृहको ताकेता